Duufaan horleh oo ku dhufatay dalka Mareykanka - BBC News Somali
Duufaan horleh oo ku dhufatay dalka Mareykanka
8 Oktoobar 2017
Image caption Duufaanta Nate uma xoogana sida kuwii hore ee Irma iyo Maria
Duufaanta Nate loo yaqaano ayaa safmartay xeebaha dalka Maraykanka deegaano u dhow wabiga Missisippia.
Waxaana la filayaa in duufaantani ay dhaliso roobab xoogan, fatahaadyo. Waxayna ku ordaysaa saacadiiba 150 kilo mitir. Duufaanta darted ayaa hadda waxaa la xiray shan dakadood. Waxaana amar lagu bixiyay in dadka la qaxiyo.
Meelaha dadka laga saarayo waxaa ka mid ah magaaladda New Orleans oo labo iyo tobon sano ka hor ay ku dhufatay duufaantii Katrina. Dufaantan Nate waxaa horay uga barakay ku dhowaan sodon kun oo qof bartmaha America.Wadamada Nicaragua,Costa Rica iyo Honduras ayay ku soo dishay 25 qof.
Inkastoo ay duufaanta u xooganayn sida duufaanta Irma haddana waxay wadataa dabaylo xoogan. Dhowaan ayay ahayd markii duufaanta Irma ay waxyeelaysay deegaano badan oo qaarada America ah.